Soo-saarista Golaha Wareegga Gudiga Xakamaynta Gawaarida Shiinaha & Warshad | KAISHENG PCB
PCBFuture waa shirkad PCB ku takhasustay sameynta PCB. Shirkaddu waxay leedahay wax soo saar xirfadeed, tijaabooyin, iibin iyo koox adeeg, waxayna soo bandhigeysaa tikniyoolajiyad casri ah iyo qalab gudaha iyo dibedda ah. Waxay badanaa soo saartaa 1-24 lakabka FR4, Qalabka aasaasiga ah ee birta (aluminium ku saleysan, naxaas ku saleysan), looxyo wareegsan oo heer sare ah.
Daahan birta: HASL waxay ku hogaamisaa bilaash
Qaabka Wax Soo Saarka: SMT +
Lakabyada: 2 PCB Lakabka
Waxyaabaha aasaasiga ah: FR-4 TG 135
Macluumaadka Aasaasiga ah:
Dahaarka birta: HASL macdanta bilaashka ah Qaabka wax soosaarka: SMT + Lakabyada: 2 Lakabka PCB
Waxyaabaha aasaasiga ah: FR-4 TG 135 Shahaadada: SGS, ISO, RoHS MOQ: Maya MOQ
Noocyada Kala-Bixiyaha: Hoggaaminta-Bilaash Adeegyada Hal-Joogsi ah: Golaha Turnkey PCB Tijaabinta: 100% AOI / E-test / Imtixaanka Muuqaalka
Taageerada Teknolojiyada: DFM oo bilaash ah (Naqshadeynta Soo-saarista) Hubi Noocyada Shirarka: SMT, THD, DIP, Teknolojiyada Isku-dhafan ee PCBA Heerka: IPC-a-610d
PCB iyo PCBA Qdiiran Tcaloosha PCB Akalabax
Erayoxul: Adeegga Golaha PCB, Nidaamka Golaha PCB, Tirada Dadka PCB, Soosaarayaasha Golaha PCB
Maxaa loo doortaa
Markaad noo doorato inaan nahay iskaashigaaga shirkadda PCBA, waxaad dooranaysaa inaad la wadaagto adeeg bixiya kuwa ugu fiican. Adeegyadayada isku imaatinka PCB waxay la kulmaan heerarka ugu tayada sareeya waxayna raacaan IPC Class 3, RoHS iyo ISO 9001: heerarka shahaadada 2008. Intaa waxaa dheer, waxaan la tacaali karnaa nooc kasta oo PCB ah, ha ahaato mid laba-gees ah ama mid hal dhinac ah, SMT, dalool ama mashruuc isku dhaf ah. Wax kasta oo aad rabto inaad sameyso, waan sameyn karnaa!
Waxaan kula soo xiriiri doonaa si joogto ah laga bilaabo bilowga mashruuca illaa iyo dhamaadka dhamaadka oo waxaan kaa ilaalin doonnaa inaad ka soo baxdo wax soo saarka ilaa shirkii. Tani waxay kaa caawin kartaa inaad lacag keydiso oo aad isku buuqisid qarashyada PCB-ga oo hooseeya, gaabinta waqtiga sugitaanka iyo bixinta alaab tayo sare leh. Waxaan rabnaa inaan ku keydinno waqti iyo tamar si aad diiradda u saarto nashqadahaaga PCB - ha ka welwelin kuwa yaryar ee habka wax soo saarka.
PCBFuture waa hogaamiye bixiye xalka PCB. Waxaan buuxin karnaa shuruudahaaga PCB-ga laga soo bilaabo soo iibinta qeybaha ilaa iskuxirka elektarooniga. Waxaan kaa caawin doonaa talaabo kasta oo aad qaaddo waxaana ku siin doonaa khibrad dhameystiran iyo hubinta tayada.
Waxaan ku bixin karnaa adeegyada hoose:
Shirka PCB ee Turnkey
Shirkii PCB mugga hoose
Golaha PCB mugga dhexe
Faylasha iyo dukumiintiyada noocee ah ayaad codsataa amarradayda PCBA?
Waxaan u baahannahay faylasha Gerber, xogta Centroid iyo BOM amarradaada PCBA. Sida aad noo dhigtay amarkaaga PCB, runtiina, haddii faylkaaga PCB Gerber ay ku jiraan daabacaadda shaashadda, raadadka naxaasta ah iyo lakabyada dhejiska dhejiska, waxaad dhab ahaan u baahan tahay oo keliya inaad dirto labada ugu dambeysa. Haddii faylashaaga PCB Gerber ay ka maqan yihiin mid ka mid ah saddexda lakab ee kor lagu soo sheegay, fadlan dib u dir iyaga, maadaama ay tani tahay codsigii ugu yaraa ee PCBA. Natiijada ugu wanaagsan ee suurtogalka ah, fadlan sidoo kale noo soo dir sawirro isku dhafan, tilmaamo iyo sawirro si aan uga fogaanno wixii mugdi iyo xitaa qaldan ee meelaynta qaybo ka mid ah, in kasta oo inta badan kulmiyayaashu aysan u baahnayn kuwan.
Sideen u xirxiraa qaybo haddii aan soo gudbiyo amarro badan?
Xirmo badan ayaa loo diri karaa hal xirmo, laakiin xirmo kasta waa in lagu calaamadeeyaa lambar amar kasta
Qaybaha loo adeegsado shaqooyinka badan waa in lagu calaamadeeyaa warqad yar si loo ogaado inay wadaagaan
Hubso inaad bixiso 5% qaybo dheeraad ah nooc kasta oo shakhsi ah
Wixii macluumaad dheeri ah, ka eeg tilmaamaheena anfacaya qeybaha shixnadaha.
Waxaan haynaa xirfadlaha PCB R & D, naqshadeynta, kooxda wax soosaarka, oo leh koox injineernimo xoog leh, khibrad qani ah, aqoon u leh ka shaqeynta mashruuca iyo naqshadeynta impedance, oo adiga lagugu habeeyay suurtagalnimada qorshaha naqshadeynta. Iyada oo leh awood adag, tayo deggan iyo gaarsiin deg deg ah, waxaa si ballaaran u aqoonsan macaamiisha.
Hore: Golaha PCc-ga jaban
Xiga: Gawaarida GPS Tracker Circuit PCB Assembly
Golaha Wareegyada Horukacsan
Uruurinta Guddiyada Wareegyada Daabacan
shirkii guddiga wareegga
Adeegyada Golaha Gudiga
Soosaarida Gudiga Wareegga
Shirkadaha Waxsoosaarka Gudiga
Adeegga Guddiga Wareegga
Golaha Kaarka Wareegga
Golaha Wareegga Elektarooniga ah
Golaha Wareega Hayalka san
Guddiga Wareegga Pcba
Golaha Wareegga Daabacan
Daabacaadda Wareegga Assy
shirkii guddiga wareega daabacay
Shirkadaha Golaha Gudiga Wareegtada Daabacan
Daabacaadda Golaha Circuit Board Manufacturer
Adeegyada Golaha Gudiga Wareegtada Daabacan
Soosaarayaasha Guddiga Wareegga Nooca
Video Qurxinta Wareegtada Golaha PCB
Smart TV Box Box PCB Main